Ray Syriana Iray Miantso Ny Raharaham-bahiny Britanika Hampihaona Ny Zananilahy Aminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2014 15:25 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Deutsch, Ελληνικά, فارسی, Swahili, English
Nilaza ilay raim-pianakaviana Syriana Wael Zain fa tafahitsoka ao Syria ny zanany lahy Britanika, dimy taona kanefa tsy manampy mba hampihaona azy ireo ny Biraon'ny Raharaham-bahiny Britanika. Sary nozaraina tao amin'ny Twitter.
Niditra Twitter i Wael Zain, Syriana monina sy miasa ao London mba hisarika ny saina manoloana ny mahazo ny zanany lahy dimy taona, Maudh, izay mizaka ny zom-pirenena britanika ary tafahitsoka ao Syria nandritra ny telo taona.
Tamin'ireo andiana sioka, nanazava i Zain fa ny zanany lahy izay nolazainy fa voatifitry ny bala vao haingana, dia niaraka tamin'ny reniny tao amin'ny tanàna kely ao Deraa, ary mila fikarakarana ara-pahasalamana. Nilaza ihany koa izy fa manao bemarenina ny Biraon'ny Rahaharam-bahiny Britanika manoloana ny fitarainany.
Nisioka i Zain, mpiavy avy ao Deraa, Syria :
Miangavy, ampio ny zanakolahy 5 taona (Britanika) ao Syria mba hody an-tanindrazana. Tsy niraharaha azy ny biraon'ny raharaham-bahiny @foreignoffice
@bbclysedoucet niaraka tamin'ny reniny tao amin'ny tanànakely akaikin'i Nawa ao Deraa. Efa 3 taona mahery izy no tao Syria. Voatifitra izy 2 herinandro lasa izay. Mila fanampiana izy
Tamina sioka hafa nalefa tamin'ny Sekreteran'ny Raharaham-bahiny Britanika William Hague, miantso i Zain:
@WilliamJHague tsy noraharahin'ny biraonareo ny zanakolahy Britanika tafahitsoka ao Syria
Nampanantena ny governemanta Britanika fa hanampy ireo mpitsoa-ponenana Syriana marefo indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy kanefa mandà tsy hanampy ankizy Britanika iray.
Nilaza i Zain fa efa telo taona izy no tsy nahita ny zanani lahy ary nizara ity sary tany aminy ity :
Sary farany ananako misy ny zanako lahy ao Syria. Tsy nahita azy nandritra ny telo taona. Mila fitsaboana ara-pahasalamana maika izy.